U-Ooni woMfazi ka-Una, u-Olori uNahomi Uyaphika Ukuqhawula Umtshato + isitayile sakhe sasebukhosini
Elegance yasebukhosini: Ukujonga isitayile sika-Olori somprofetikazi kaNahomi njengoko Elahla Uqhawulo-mtshato
INgo-Oktobha ka-Okthobha i-Ooni yase-U, Oba Adegeye Ogunwusi watshata noProfessor Silekunola Monorenike UNahomi Oluwaseyi. Njengoko bekulindelekile, umtshato wawuphelele kwimithombo yeendaba nakwizindebe zabemi abaninzi baseNigeria. Oku kungenxa yesizathu sokwahlukana ngesiquphe komtshato wakhe wesibini owashiya abaninzi bethe manga kwaye bezibuza ukuba liza kuthweswa nini ikumkanikazi entsha.
Ukubhengezwa komprofetikazi njengo-Olori omtsha kuya kumakisha okokuqala umlawuli wemveli odumileyo waseNigeria okanye amaqabane abo ekhonza njengomlungiseleli weVangeli. Njengomsunguli we-EN Heralds, ese-Akure, e-Ondo State, uKhulu yena uqhube inkonzo ukusukela kwiminyaka elishumi elinesibhozo. Uye waba ngumshumayeli wexesha elizeleyo ngo-Okthobha ka-2011.
U-Ooni Adeyeye Enitan Ogunwusi kunye noKumkanikazi uSilekunola uNahomi
Kwindlu yasebukhosini eneminyaka engama-27 ubudala, ukukhonza abantu bayo kunye nokusebenzela uThixo akukho ndlela iphikisayo njengoko eqhubeka kakuhle nokuphatha iindima zombini. Ubuhle bendalo bokwenyani, u-Olori uNahomi ubonakala ekuphepha ukuthathelwa ingqalelo okungafunekiyo kwimithombo yeendaba, ekhetha ukugxila kwiindima ezininzi azikhokelayo. Iindaba zokudumisa zaseNigeria namhlanje.
Mva nje, amahemuhemu ebebhabha ejikeleza ukuba umtshato wakhe u-Ooni wase-Ukohlakele. Amarhe, ebeqhubeka okwethutyana ngoku anokuba avele ngenxa yokuba u-Ooni womtshato wesibini ka-Una UWuraola Zaynab waphela emva konyaka engekho.
Kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo, umprofessikazi ekugqibeleni wathetha malunga namahemuhemu. Ngokukhanyela, wabelane ngale ngxelo ngezantsi kwiphepha lakhe le-Instagram:
“Kukho amahlebezi angaqhelekanga kwaye iindaba ezingachazwanga zisasazeka zisasaza kumajelo eendaba kwezentlalo kutshanje. Ndifuna onke amakholwa eendaba ezimnandi ayazi loo nto, bubuxoki bonke kunye nomfanekiso wendlela abahamba beendaba ezimbi ukuba babeyithanda ibali lethu lothando. Ndingathanda ukuthula, nangona kunjalo, ngenxa yeenkxalabo ezivezwa ngabantu abaneenjongo ezintle into ethile ekufuneka iyithethile. Ngoku, iinyani zevangeli kukuba bendixakekile kukushumayeza indawo yeendaba zentlalo kwaye nonke niyakuvuma nam ukuba ngesibetho esiqhubekayo esiye sivele ngequbuliso kuthi sonke, sithetha nje ukuba umsebenzi mninzi ekufuneka wenziwe. Andikwazi ukuhlala ndikhala (njengoko kungekho mntu unikwe ilungelo elaneleyo loku) kwaye eli asiloxesha lobukho bomsasazo loluntu kodwa lixesha elifuna ukuzithoba. Ke ikhefu lam kule nto abantu abayibiza ngoku njengesiqhelo. Okokugqibela, njengoko kuya kufuneka ukuba ndenze, ndiye ndangena ngaphandle kwendlu ndenza ukuthanda kukaThixo. Ngayo yonke loo nto ithethwayo, ndinyanzelekile ukuba ndibuze le mibuzo ilandelayo:
Kutheni le nto abantu bengakuqinisekisi oko kuyinyaniso?
Kutheni le nto abantu bekholelwa ngakumbi kubuxoki kunye nokungakhathali? Ewe, ibhayibhile inento eyithethayo ngabo kwiNdumiso 2: 1-12. Ngoku nditsho kuni nonke, nceda ningahoyi kwaye nijettison zonke iinyani kunye neendaba ezimbi ngam kunye nomyeni wam (Ooni Adeyeye Babatunde Enitan Ogunwusi) eyethu luthando akukho mandla wasemhlabeni omelele ngokwaneleyo ukuba aphule, siphilile kwaye siphilile. Iindaba zokudumisa zaseNigeria namhlanje.
Ndiza kukushiya ngale nto 'nceda uthuthuzeleke kukwazi ukuba isithukuthezi sibulala abantu kwaye benze izinto ezingacingekiyo xa (benesithukuthezi).' Uxolo nothando ngamaxesha onke.
Imigca ecaleni, uKumkanikazi uSilekunola sele ekwi-radar yethu okwethutyana ngoku, ngenxa yendlela yakhe ekhulayo. Njengomfazi ku-Ooni wase-Une, ubelokhu eqhubeka ngokukhupha ububele kunye nobuhle ngalo lonke ixesha ukususela ekufikeni kwakhe kwibhotwe lase-Ile-Una.
Ezemidlalo zinxibe impahla emhlophe njengoko ngokwesiko kufunwa isikhundla sakhe njengoKumkanikazi, ungambona usuka kude. Ugqibezela uninzi lwenkangeleko yakhe ngamakhorali, ubuso obube kakuhle okanye ubuncinci bokubomvu okanye okumile okwepinki, kunye noncumo oluhle.
Ukusuka kwiengubo zemveli zanamhlanje ukuya entloko ezinqabileyo kunye nobucwebe obujongise ngamehlo, isitayile sika-Olori uNahomi yenye efanekisela umanyano lwefashoni yendabuko yaseYoruba kunye nefashoni yanamhlanje yaseNigeria. Iindaba eNigeria
Jonga isitayile saseOlori uNahomi ...
Ukumkanikazi (ekunene) kunye nonina
Ityala lemifanekiso: Instagram | U-Olori Umprofetikazi uNahomi Ogunwusi Iindaba eNigeria
amahemuhemu osaziwayo Okufumaneka ubukhosi baseNigeria Obeunye Ogunwusi UOlori naomi Ooni of Ife U-Ooni womfazi ka-Una isitayile sasebukhosini